Posted on May 26, 2011 by giriyaad
Professor Ahmed I. Samatar iyo socdaalkiisa Ottawa
Bishan dhamaadkeeda waxaa magaalada Ottawa ee caasimada Canada ku soo beganProfessor Ahmed Ismaciil Samatar oo ah cilmibaadhe soomaliyeed. Dr Samatar wuxuu professor ka yahay James Wallace isagoo dhiga International Studies isagoo waliba Hormood( Dean) ka ah Macadka “Institute for Global Citizenship” ee Macalester College oo ka mid ah Jaamacada Minnesota ee dalka Maraykanka. (His current research is on two tracks: leadership and the state in Somalia, and globalization and the rise of Islamic consciousness).
Dr Ahmed I.Samatar wuxuu soddan sano ku dhawaad u kuurgalaayay arimmada siyaasada iyo bulsho ee Somalia waana aqoonyahan is waafijiyey cilmigiisa iyo baahida loo qabo in la darso dhibaatooyinka soomalida haysta. Kartidiisa shaqsi ahaaneed wuxaa ku ladhan cilmigiisa muga leh ee lagu qadariyo wuxayna soomalidu uuga baratay ka dhawaajinta xaqiiqooyinka ummadiisa hortaal, lamina gabado inuu ku dhawaaqo runta sidey doonto ha u qadhaadhaatee.
Socdaalka Ottawa ee Professorka wuxuu ku lugleeyahay inuu reer Ottawa u soo bandhigo daras siyaasadeed oo walwaalaya farsamooyinka Soomali u sahlaaya inay ka gudubto mugdiga una gudubto barnaamij rajo xambaarsan. Barnaamijkaa rajada xambaarsan waa mabda’a ka dambeeyee aas-aaskii ururka siyaasadeed eeHiil-Qaran ee dhawaanta aqoonyahano soomaliyeed ku dhawaaqeen.
Daraska siyaasadeed ee Professor Samatar arimada uu soo bandhigi doonaa waxaa ka mid ah tasfiirka mabaadiida Hiil-Qaran, ururkaas oo ka soo maanguurey aqoonyahano soomaliyeed oo ka dhawaajiyey inay heleen oo ay hayaan dawadii Qaranka soomaaliyeed dib ugu nooleyn lahayd Nafteeda oo ah Dawlad Somaliyeed ( Somali State).
Hiil-Qaran dadka u tafaxaytay waxay si mug leh u darseen dhibta soomaliyeed gaar ahaan sobobaha ay u fashilmeen ama wax taag daran uga soo baxay dhowr iyo tobankii shire ee isku dayay in Dawladii Soomaliyeed haykalkeedii la soo cesho. Cilmi baadhistaasi waxay keentay in Hiil-Qaran fahmo guuldarooyinkii hore dabadeedna, fahankaasina wuxuu u sahlay inay helaan dawooyinka ama sifooyinka hogaankooda iyo ummada soomaliyeed ka badbaadin kara dabinadii horey u fashiliyey shirarkii badnaa ee madhalayska noqdey.
Bulshada soomaliyeed ee deggan Ottawa waxay aad ugu xiiso weyn yihiin inay dhagaystaan Professor Samatar iyo faahfaahinta uu ka bixin doono arimada aan kor ku sheegnay. Kulanka Professor Samatar qabanaayo wuxuu ka dhici doonaa bishan May 29, 2011 keeda jaamacada Ottawa ( OU) saacada markay tahay 2:00PM-6PM. ( Waa kulan dadweynaha u furan).
Inta uu joogo Professorku Ottawa wuxuu waliba maalinta sabtida ee 28 ka May ( 2:00PM-5:00PM) ka hadli doonaa Bayshore Community Centre halkaas oo uu kula kulmi doono Tol Leadership Council xubno ka mid ah, dhalin, waayeel iyo madax-dhaqameed kala duwan. ( contact: 613 600-7332).
Shabakada Wadhaf News, waxay professor Samatar u rajaynaysaa socdaal wanaagsan.